Nanao fanairana maika ny Filohan’ny Repoblika ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives au Développement - Océan Indien) tamin’ny taratasy misokatra nataony androany 14 septambra 2019, mahakasika ny "radioactivité" ao Ranobe izay itrandrahan’ny tetikasa Base Toliara fasimainty ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana mba ahazoana ilmenita (« ilménite »), sy zirkôna (« zircon ») ary rotila (« rutile »). « Tandindomin-doza ny Fokonolona », hoy ny taratasy, « noho ny mety ho fiantraika mamoheha-dozan’ity tetikasa ity aminy, koa miandry ny fanambaràna amim-pomba ofisialy » avy amin’ny filohan’ny Repoblika « ny hanohizana na hampijanonana ny tetikasa, satria mandritra izany fiandrasana izany dia manohy ny asany am-pianjonanjonana ireo mpitantana azy ».
Teratany indianina i Erramatti Mangayamma. 73 taona izy izao, tantsaha. Tamin’ny 1962 izy no nanambady, 80 taona izao rangahy vadiny. Tsy nety nahazo zaza mihitsy izy mivady hatramin’izay nivadian’izy ireo. Ny taona 2018, tapa-kevitra izy mivady fa hanantona klinika mahay manokana momba ny fampitsehana ny tsirinaina lahy sy vavy ivelan’ny tranon-jaza (fécondation in vitro). Nahomby izany taorian’ny andrana samihafa natao. Teraka omaly 12 septambra 2019 i Erramatti Mangayamma. Kambana roa vavy ny zaza teraka, taorian’ny fandidiana natao (césarienne) noho ny renin-jaza efa nahazo taona. Mbola arahi-maso mandritra ny 21 andro ny fahasalamany taorian’izao fiterahany izao. Heverina fa i Erramatti Mangayamma no vehivavy antitra indrindra manerantany vao niteraka. (Jereo sary Tohiny)
jeudi, 12 septembre 2019 16:40
Fahasalamam-bahoaka: Notolorana mari-pankasitrahana ireo mpilatsaka an-tsitrapo teny Soamandrakizay
Mpizaika niisa 1356 no noraisin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo an-tanana nandritra ny hetsika teny Soamandrakizay, ny 7 sy 8 septambra 2019. Nanolotra mari-pankasitrahana ho an'ireo rehetra niantsehatra, ho fahatsiarovana ny nandraisan'izy ireo anjara tamin’ny adidy masina sy lehibe, nandritra ny fitsidihan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ho mariky ny asa rehetra vitan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo am-pitiavana. Nitarika ny lanonana ny Pr Rakotonirina Julio, Ministry ny Fahasalam-bahoaka. Navitrika ireo mpilatsaka an-tsitrapo nijery sy nanara-maso ireo mpizaika teny Soamandrakizay nandritra iny fitsidiana masina iny. Isany nahazo fisaorana manokana ny Ministeran'ny fahasalam-bahoaka tamin'ny ezaka sy ny asa vita nandritra ny fandalovan'ny Papa Fransoa teto Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
Matetika no isehoana lozam-pifamoivoizana ny lalam-pirenena eto Madagasikara, indrindra ny lalam-pirenena faha-2 sy faha-4 ary faha-6 iny. Ny tsy fahatomombanana ara-teknikan’ny fiara no voalaza hatrany fa fototry ny loza, na dia fiara vita fitsirihana ara-teknika ara-dalàna izao aza no mifamoivoy. Manamarika ireo mpamily, indrindra ireo kaoperativa mpitatitra olona, fa ny haratsian’ny lalana sy ny hatereny no isan’ny tena mahatonga ny loza amin’ny lalam-pirenena. Noho io haterin’ny lalana io dia matetika latsaka any anaty « accotement » ny fiara rehefa mifanena, indrindra raha fiara lehibe toy ny kamiao no mifanena, dia matetika eo no miseho ny loza fa tsy tafaverina anaty arabe ny fiara lasa anaty « accotement ». Hetahetan’ny mpamily ny hisian’ny fikojakojana ny lalana ara-potoana fa sady fisorohana ny lozam-pifamoivoizana no tsy manimba fiara ihany koa.
Tonga any Balmaseda, Bilbao, Espagne ireo teknisianina roalahy nalefan'ny Ministeran'ny fitaterana, ny fizahantany ary famatarana ny toetrandro, hijery ifotony ireo lohamasina roa ho an'ny FCE (Fianarantsoa-Côte Est). Raha tsy misy ny fiovana dia ho tonga ao Fianarantsoa alohan'ny faran'ity taona 2019 ity ireo lohamasina ireo. Fampanantenan'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny hahazoana ireo lohamasina ireo, ho an’ny FCE. (Jereo Sary Tohiny)
Tonga soa amantsara ao Xi'an renivohitry ny faritanin’i Shaanxi any Chine ireo mpianatra malagasy 15 mianadahy, nahazo vatsim-pianarana handrato fahaizana any an-toerana. Mpianatra avy amin'ny polyteknika Vontovorona sy IST izy ireo, ary haharitra dimy taona ny fianarany any Chine, amin'ny lalam-piofanana injenieran'ny Asa Vaventy, araka ny vatsim-pianarana nomen'ny orinasa China Road and Bridge Corporation (CRBC) azy ireo, tamin'ny alalan'ny ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy.
Naka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Repoblika, raha mifanaraka amin’ny Andininy faha-49 ao amin’ny Lalampanorenana ny fananganana « Fondation », izay rafitra tohanan’ny olontsotra tsara sitrapo na orinasa manao tolo-tanana hanaovana asa soa ho an’ny daholobe. Voaray ao amin’ny firaketan’ny HCC ny 6 septambra 2019, nifanojo indrindra tamin’ny andro nanombohan'ny fitsidihana Apostolika nataon’ny Papa Ray Masina Fransoa teto Madagasikara, io taratasin’ny filohan’ny Repoblika io. Ny Andininy faha-49 amin’ny Lalampanorenanana dia milaza fa « Ny asan’ny Filohan’ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina aminà asampanjakana nahavoafidim-bahoaka, asa aman-draharaha hafa, asa ao anatin’ny antoko politika, vondrona politika, na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanampivavahana. Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Filohan’ny Repoblika ».
Nilamina ny fanombohan’ny fanadinana BEPC tamin’ireo fari-piadidiam-pampianarana miisa fito ato amin’ny faritra Vakinankaratra omaly alatsinainy 09 septambra, hoy ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena, ny fanofanana teknika sy arak’asa DRENTP Vakinankaratra, Rakotoarimanana Heriniaina. Miisa 21 467 ny mpiadina voasoratra anarana ka ato amin’ny Cisco Antsirabe ny 5 706 amin’ireo. Mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 78 manerana ny faritra izy ireo. 9 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpiadina, izay avy any amin’ny Cisco Mandoto, ary 51 taona no zokiny indrindra avy ao Betafo. (Jereo Sary Tohiny)
Niakatra avo dia avo ny hafanana tany Frantsa nandritra ny roa volana, jona sy jolay lasa teo iny. Nahatratra 42°C tao Paris renivohitra, tonga hatrany amin’ny 46°C izany tamin’ny faritra sasany, toy ny tany Hérault. Maro ny namoy ny ainy, tsy nahazaka ny fidangan’ny hafanana. Nahatratra 1 435, ka 567 tamin’ny volana jona, ary 868 nandritra ny volana jolay.
Raha ny tarehimarika vonjimaika ny andron’ny 8 septambra 2019, nisian’ny lamesa lehibe teny Soamandrakizay, ivon’ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Ray Masina teto Madagasikara dia nahatratra 248 ireo marary nozahana sy notsaboina tao amin'ny PMA (Poste Médical Avancé) teny an-toerana. Tsy maintsy nampidirina hopitaly ny 15 tamin'ireo, nisy nalefa tao amin’ny HJRA Ampefiloha, ny sasany kosa tao amin’ny HJRB Befelatanana. Nisy olona iray voan’ny sohika mahery (asthme suraigu) nindaosin’ny fahafatesana na teo aza ny ala nenina nataon’ny mpitsabo taminy. Mafy ny asan’ny mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo teny Soamandrakizay ny sabotsy sy alahady noho ny vovoka tena nitorajofo.